ग्रीस - संसारभरि देखि पर्यटकहरु द्वारा सबैभन्दा भ्रमण देशहरूको एक। मायालु घाम जलवायु, समुद्र पहुँच, सांस्कृतिक आकर्षण र सुन्दर प्रकृति यदि जानबूझ यसको स्पा वस्तु सिर्जना गरियो। हरेक वर्ष, धेरै होटल hospitably सबैभन्दा अप्रत्याशित समय र मनोरञ्जन सेवाहरू भेटी, अतिथि को लागि आफ्नो ढोका खुल्छ छन्। वन पार्क होटल लोकप्रिय सेवाहरू मध्ये एक हो। यसको सुविधा र अनुभवी यात्री को समीक्षा थाह गर्नुस्।
स्थान र वरपर
उत्तरी ग्रीस मा नेत्रहीन तीन औंलाहरु संग हात सम्झाएर, एक असामान्य आकार छ जो Halkidiki एक प्रायद्वीप छ। Cassandra भनिन्छ पश्चिमी खण्ड। यो यहाँ छ, र स्थित छ तीन-तारे होटल वन पार्क। यो ठूलो समुद्र खण्ड र दुई रिसोर्टमा सहर Kriopigi (1.5 मी) र Kalithea (2.5 मी) बीच अनन्त समुद्र संग हरियो पहाडी मा एक लाभप्रद स्थान लियो।
स्थलहरू शहरी प्रयास र bustle deprived। वरिपरि होटल केन्द्रित शंकुधारी वन र thyme को thickets छन्। तसर्थ, यहाँ आउन जो, पर्यटक सद्भाव, मौन, ताजा, राम्रो stupefying हावा र प्रकृति संग एकता को एक वातावरणमा जोडतोडले छन्। निकट भविष्यमा यस्तो परिदृश्य नरमाइलो लाग्यो अतिथि तिनीहरूले खलीफा छिमेकी गाउँ, मनोरञ्जन यसको प्रशस्त लागि प्रसिद्ध जाने सक्नुहुन्न भने।
यो जलवायु ग्रीक प्रायद्वीप मा थोरै छ। पर्यटकहरु को आगमन मुख्यतः गर्मी मौसममा रेकर्ड भयो। जुन देखि अगस्ट गर्न अवधिमा औसत तापमान लगभग 25-27 डिग्री छ। तर, विशेष गरी तातो दिन (अप गर्न 37 डिग्री) छन्। Chalkidiki शरद ऋतु थप गर्मी को शुरुवात जस्तै हो, त्यसैले सेप्टेम्बर र अक्टोबर पनि यहाँ आराम गर्न एक महान समय हो। तापमान 23 21 को बीच र डिग्री लिएर।
समुद्रको माथिल्लो तहहरू वसन्त मा न्यानो सुरु, त्यसैले पर्यटक सिजन, यो एउटा अनुकूल र मायालु बन्छन्। र शाब्दिक को तातो दिनमा पर्यटकहरु एक सुखद ठंडक र प्रकाश breezes बचाउँछ।
वन पार्क होटल 1991 मा स्थापित भएको थियो र आर्थिक होटल पर्छ, तर यो आफ्नो सेवा को गुणस्तर देखि कम छैन। , तीन-मंजिल्ला भवन, 2003 मा जीर्णोद्धार चिटिक्क र स्वागत देखिन्छ। छापिएको ट्रेल्स र राम्रो-groomed क्षेत्र उच्च गुणवत्ता र कर्मचारी को मेहनती काम को छाप दिन। आन्तरिक होटल सजावट संयम, विशाल र सुरुचिपूर्ण शैली द्वारा विशेषता छ। उज्ज्वल रंग बनेको लबी, तल्ला हिउँ-सेतो टाइल्स कवर। सँगै काठ फर्नीचर, एक ठूलो चिमनी, रंग फैलाउने यो सबै सफाई, आराम र विश्राम को एक वातावरण सिर्जना गर्छ। होटल नोभेम्बर अप्रिल देखि संचालित। चिसो दिनमा, ताप काम गर्दछ, र तपाईं लबी मा चिमनी गरेर न्यानो गर्न सक्नुहुन्छ।
शहर Saktonii (बारेमा 85 मी) मा स्थित छ, को "म्यासिडोनिया" विमानस्थलबाट बस वा कार द्वारा: त्यहाँ दुई होटल पुग्न तरिकाहरू छन्।
विशेष ध्यान वातावरण र रंग प्यालेट मा स्पेस सेवाको सामान्य डिजाइन को एक निरंतरता छन् जो कोठा, विवरण दिइएको छ। वन पार्क होटल 45 मानक कोठा (एकल, डबल र परिवार वर्ग) छ। प्रत्येक कोठा एक निजी बाथरूम, एक फ्रिज, उपग्रह टिभी (एक रूसी च्यानल देखाउँछ), टेलिफोन, hairdryer, व्यक्तिगत वातानुकूलन र एक बालकनी-छत छ। कोठा बलौटे किनारमा मा हराउँछ जो वन बेल्ट, एक दृश्य छ। छत क्षेत्रमा एक चिया पार्टी वा रोमान्टिक खाने व्यवस्था गर्न अनुमति दिन्छ। यो उद्देश्य, एक कोठा सेवा। एक सुरम्य परिदृश्य सही पूरक हो।
प्रत्येक कोठा प्रकार यसको आफ्नै नियम छ। त्यसैले, एक कोठा मा एक वयस्क (+ बच्चा) को लागि बसोबास गर्न अनुमति दिनुभयो। तीन वयस्क अधिकतम डबल कोठा मा समायोजित गर्न सकिन्छ। परिवार वर्ग दुई बेडरूम र चार एकल बेड पनि समावेश छ। तिनीहरूलाई सबैभन्दा मात्र चार मान्छे राखिएको गर्न सकिन्छ।
हरेक तीन दिन - वन पार्क होटल मा घरेलू, दैनिक गरेका ओछ्यान तन्ना छ।
आधा बोर्ड (नास्ता र खाने) - होटल मा भोजन को एक प्रकार संचालित। वन पार्क होटल संग ग्रीक र अन्तर्राष्ट्रिय भोजन, एक सराय र दुई बारहरू (खाजा बार र पूल) छुट्टै भवन मा रेस्टुरा छ। मेनु फरक सलाद र डेली मासु सहित व्यञ्जन विविधता छैन। दैनिक ताजा फल र तरकारी। पट्टी नाश्ता र ककटेल गर्दछ।
वन पार्क होटल3* सेवाहरू एक भद्र सूची मान्छ। यसलाई जहाँ तपाईं अटुट वाइफाइ-इन्टरनेट तपाईं समुद्र तट र उपयोगी कुराहरू लागि आवश्यक सबै, साथै खरिद गर्न सक्नुहुन्छ होटल, मिनी मार्केट, नजिकै मुक्त पार्किंग समावेश छ। स्वागत बहुमूल्य वस्तुहरू र कागजातहरू भण्डारण लागि निःशुल्क सुरक्षित छ।
वन पार्क होटल, सामान्य मा Halkidiki, बच्चाहरु संग मनोरञ्जनको लागि एक आदर्श स्थान हो। यो कोमल जलवायु, समुद्र हावा र प्रायद्वीप को अचम्मको वनस्पति द्वारा facilitated छ। यो ताजा पानी र उसलाई छेउमा परेर, सूर्य loungers र parasols एउटा बाहिरी स्विमिंग पूल विशेषताहरु। यो केवल होटल निर्माण तल स्थित छ, त्यसैले प्रशासन नाश्ता र पेय लागि अनुकूल र समसामयिक सेवा संग एक poolside पट्टी प्रदान गर्दछ।
एक हप्ताको एक पटक होटल न्यानो आतिथ्य र होस्टहरूको वन पार्क होटल को आतिथ्य देखाउँदछ ग्रीक रात, व्यवस्थित। यस्तो सांझ ग्रीक संगीत संग कार्यक्रम को अतिथि लागि खाना पकाउने, नाच, प्रसिद्ध मदिरा र पाकशाला Delights यसको क्षेत्र भर Cassandra। छोटो, यो सबै ग्रीक संस्कृति खुसी भन्दा ती व्यवहार गर्नुहुन्छ।
बच्चाहरु को लागि
साना आगंतुकों लागि त्यहाँ एक बच्चाहरु पूल खण्ड छ। कुनै साइट, तर तपाईं एक छुट्टी संगठित गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यहाँ मनोरञ्जन कार्यक्रम छन्। साथै, छोराछोरीलाई होटल स्वामित्वमा छ जो बगैचा, मा पाइन वन वा प्ले मार्फत उपयोगी आकर्षक पैदल हुन सक्छ।
दोस्रो समुद्र तट रेखा, जो मा वन पार्क होटल3* (Chalkidiki) आधुनिक आकर्षण संग सुसज्जित छैन। त्यसैले यहाँ तपाईं पूर्णतया ताजा समुद्र breezes र छालहरू उछिट्टिएको को लेकानेखुसीगर्छ आनन्द उठाउन सक्छौं। समुद्र किनारमा दूरी 250 मिटर छ। एक शुल्कको बालुवा र कंकड समुद्र तट, आवश्यक बेड, पाल, गद्दे प्रदान गर्दछ, र यति मा। साथै एन, काम लकर कोठा र शौचालय।
पहिले नै उल्लेख रूपमा, वन पार्क होटल3* बजेट विकल्प मनोरञ्जन छ। सेवा एउटा सरकारी वेबसाइट, रेस्टुरेन्ट र बारहरू सेवा, मनोरञ्जन, मेनु को कहाँ सबै किसिम छ। उल्लेखनीय absentee डेटिंग ग्यालरी प्रशासन वन पार्क होटल प्रस्तुत। विस्तार फोटो स्थिति कोठा देखाउन, र आफ्नो मूल्यहरू राख्नुभयो। निस्सन्देह, लागत मौसम को सम्बन्ध मा फरक हुन्छ। उच्चतम जुलाई र अगस्ट छ।
संख्या मा अनुमानित परिमाण एक डबल कोठा (एक दिन) को लागि 42 46 मा यूरो देखि लिएर। यो मूल्य सबै भोजन (नास्ता र खाने) र सबै सेवा सुविधा प्रयोग गर्ने अधिकार समावेश छ। होटल देखि साइटमा फोन नम्बर वा पत्र द्वारा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। यस मामला मा, टूरिस्ट आफूलाई आफैले होटल विमानस्थलबाट टिप्न व्यवस्था गर्न उडान नम्बर बहिष्कार उडानहरू र प्रशासन किनेको।
तथापि, तपाईं यात्रा एजेन्सीहरू, सबै व्यवस्था आफूलाई हुनेछ जो सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर यस मामला रहनुहोस् एक सानो अधिक महंगा हुनेछ।
यो वास्तवमा वन पार्क होटल3* वास्तविकता देखा के अनुमान गर्न गाह्रो छ। ग्रीस, विशेष Chalkidiki सधैं सांस्कृतिक र प्राकृतिक स्रोतहरू मा, तर पनि आफ्नो सेवा बारे मात्र होइन धेरै अनुकूल समीक्षा प्राप्त गर्दछ। तर, यो देशमा यो एकदम विपरीत छ। त्यसैले, मान्छे पहिले नै विशेष सेवा को underside देखेको र उपयोगी जानकारी साझेदारी गर्न इच्छुक छ भएकाहरूलाई को राय विश्वास गर्छन। वन पार्क होटल को लागि को रूप मा, तीन-तारे होटल तिनलाई बारेमा समीक्षा, एकदम विरोधाभासी छन्। र तिनीहरूले धेरै हदसम्म मानव कारक मिलाउँछ छन्। आखिर, कुनै पनि रूसी पर्यटक को मनोविज्ञान युरोप छोडेर मा, म निरपेक्ष सान्त्वना प्राप्त र युरोपेली, कुलीन सेवा रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ भनेर डिजाइन गरिएको छ। तर वास्तवमा अक्सर स्वाभाविक dissatisfaction गराउँछ जो एक फरक तरिका, मा हुन्छ।
पहिले नै भ्रमण गरेका वन पार्क होटल र सबै "फाइदा" र वजन गर्ने रूसी यात्री को विचार थाह प्राप्त "बुरा।"
पर्यटकहरु अविश्वसनीय सुरम्य प्रकृति, भूदृश्य मैदान र होटल कर्मचारी को आतिथ्य लगे Halkidiki मा ग्रीक सेवा unambiguous लाभ लागि। सबै कर्मचारीहरु रूसी बोल्न, त्यसैले कुनै प्रत्येक अन्य बुझ्न कुनै कठिनाइ छ।
विमानस्थलमा, आगंतुकों द्रुत बिन्दु गर्न यात्रुहरू पठाएमा जो एक आरामदायक बस, द्वारा स्वागत छन्। होटल एउटा पहाड छ रूपमा, नजिक यसलाई ड्राइव ओसारपसार गर्न सक्दैन। तसर्थ, उचाल्न सूटकेस अतिथि एउटा अनुकूल भ्रमण गाइड, होटल कर्मचारी वा सेवा द्वारा अभिवादन गर्दै हुनुहुन्छ। संख्या समायोजित र ढिलाइ बिना।
वन पार्क होटल3* (ग्रीस) एक मिनी-होटल मानिन्छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यो एकदम ठूलो क्षेत्र लाग्छ। भित्र ठाउँ धेरै, को कोठा पूर्ण निःशुल्क र फर्नीचर को प्रशस्त द्वारा तोकियो छैनन्। यो सबै आर्थिक तर स्वादिष्ट सुसज्जित। म, लक्जरी जोड कि respectability कुनै पनि रेखा छैन। तर प्रकाश रंग र finishes र भद्र सामान संग laconic शैली सान्त्वना र सद्भाव सिर्जना गर्नुहोस्। पर्यटक कोठा र आसपास क्षेत्र को सफाई भन्छन्।
नाश्ता र रात्रिभोज सेवा, स्वादिष्ट ताजा, पौष्टिक, तर तामझाम नगरी प्रस्ताव छन्। खाजा अलग भुक्तानी छ, वा तपाईंलाई आवश्यक minimarket किन्न र समुद्र तट तपाईं संग लाग्न सक्छ। ककटेल मेनु बारहरू विविध, छोराछोरी र वयस्क केन्द्रित।
पूल बस रेस्टुरेन्ट तल छ। पानी दैनिक परिवर्तन छ, बेड र छाते - नि: शुल्क। तर उहाँले तल समुद्र जान चाहनुहुन्छ नगर्ने ती लागि थप आए। विशेष गरी देखि भावनात्मक र सकारात्मक पाइन रूखहरू घेरिएको छ जो समुद्र तट, मूल्यांकन भएको थियो। सेतो बालुवा, पेबल्स स्थानहरू - एक महान र निःशुल्क खुट्टा मालिश। तल बलौटे, समुद्रमा चिल्लो प्रविष्टि छ।7यूरो लागि sunbeds र छाते को भाडा को किनारमा मा। तथापि, व्यावहारिक ज्ञानयुक्त देखि पर्यटकहरु, पैसा बचत गर्न मिनी बजार मा एक चटाई किन्न र रूखहरू छाया मा आराम निर्धारित।
वन पार्क होटल - एक एकांत सानो घर, शाब्दिक सामान्य हल्ला सभ्यता देखि भताभुङ्ग। यो नाइटक्लब र मनोरंजन पूरा गर्दैन। तर तिनीहरूले होटल देखि 2.5 किलोमिटर छन्। तपाईं आधा एक घण्टा वा ट्याक्सी द्वारा हिंड्न सक्छौं स्थानहरू प्राप्त गर्नुहोस्। सबै स्वाद को लागि मनोरञ्जन Kalithea को गाउँमा प्रदान गर्दछ। तर हामी एक सय केही यूरो मा शेयर गर्नुपर्छ सबै खुशी रूपमा - भुक्तानी। को राय मा, उदाहरणका लागि, नाइट क्लब गर्न प्रवेश बारे 8-10 यूरो लागत। होटल Halkidiki (Meteora र Thessaloniki) को नजिकै सहर गर्न यात्राहरु लाग्न सक्छ जो, पुरातन भग्नावशेष मार्फत हिंड्न र ग्रीस को इतिहास पत्ता लगाउन भ्रमण गाइड छ।
र अन्तमा, पर्यटक बहुमत गर्न सहमत जो सबैभन्दा ठूलो फाइदा, सबै सुविधाहरु गर्न किफायती मूल्यहरु छन्।
सेवाहरूको विस्तृत, लामो सूची संग उज्ज्वल विज्ञापन तापनि वन पार्क होटल मा बच्चाहरु को लागि एनिमेशन छैन3छ *। हुनत, विशेषज्ञहरु अनुसार, यो हुनु हुँदैन। यो तीन तारा को श्रेणी अनुरूप छ।
यसलाई केही पर्यटकहरु बीच स्थान स्वाद छैन। यो दूरी मात्र 250 मीटर छ तापनि, यो भएको होटल स्थित छ हिल देखि वंश मा विजयी हुने छ। र चरण तल सजिलै हटाउन पनि भने, पौडी र सूर्य, एक लामो दिन पछि वृद्धि यो जटिलता केही बनाउन।
तल, छोटो दूरी दूर व्यस्त राजमार्ग निहित। त्यहाँ कुनै ट्राफिक बत्ती वा पैदल क्रसिंग वा "गति टक्कर" मा। कहिलेकाहीं पर्यटकहरु अन्य पक्ष जान आवश्यक छ। यो हामीले शाब्दिक सडक चल्छन् छ। यो सडक खण्ड नजिकै दुर्घटना उत्पन्न मा अक्सर पनि छ। तसर्थ, कर्मचारी बच्चाहरु दिनु सिफारिस गर्दैन। र एकै समयमा समस्या समाधान गर्न प्रयास छैन।
मान्छे मौसम को बीचमा होटल मा एक बाँकी भइरहेको लागि, एक महत्वपूर्ण बेफाइदा संख्या मा राम्रो audibility थियो। पर्यटकहरु पनि जुन वा सेप्टेम्बर मा होटल भ्रमण गरेको छ, सानो धेरै स्वागत थियो जो, अतिथि संख्या उल्लेख गरे।
यी होटल वन पार्क होटल बारे गठन मिश्रित राय छन्। Halkidiki, विशेष Kassandra, आधिकारिक एक रिसोर्टमा क्षेत्र छ, तर यो धेरै peculiar देखिन्छ। निस्सन्देह, विज्ञापन स्रोतहरू धेरै सत्यवादी जानकारी प्रदान। तर कहिले काँही यो एक बिट बढाइचढाइ छ। त्यसैले, वन पार्क होटल मा ग्रीस जाँदै राम्ररी विचार एकैचोटि लायक सबै, वजन र एक निश्चित खुरदरापन लागि तयार हुन, त्यसैले तिनीहरू लामो प्रतीक्षा छुट्टी बिगार्छ छैन।
होटल हनोई स्वर्ण होटल3* Nha Trang, भियतनाम: एक सिंहावलोकन, वर्णन र समीक्षा
क्राइमन होटल। हिजो, आज र भोलि।
"महान् होटल Astrakhan ': विवरण, समीक्षा र फोटो
Veliky Novgorod होटल: समीक्षा, ठेगाना
कुन विन्डोज राम्रो छ निर्धारण गर्नुहोस्
बिरालोहरु लागि वुडी फिलर: सुविधाहरू, लाभ, प्रयोग विधि
भिटाली पिक: जीवनी र काम
कसरी रोक्न समानांतर समानांतरमा पार्क गर्नुहोस्।
फेरि टाटा सोलारिस प्रतिक्रिया मात्र सकारात्मक चरित्र पाए।
सबैभन्दा असामान्य पशु ग्रह - जो तिनीहरूले छन् र के चासो?
जीवनी Andrei Urgant। क्यारियर र व्यक्तिगत जीवन
"Kvinaks": प्रयोगको लागि निर्देशन
म ब्रेसहरू राख्नु र तिनीहरूलाई लगाउने चोट?
भर्नको संग स्वादिष्ट मिठाई केक: नुस्खा